တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မေးက မနှစ်သက် … ဘာဟင်းချက်
Posted by မေဓာဝီ at 11:37 AM
အခု စလုံးမှာ ညနေစာ စားချိန်ခင်ဗျ
မမေဓာဝီက အခုလို တင်လိုက်တော့ တော်တော်ကို ဗိုက်ဆာသွားပြီ
အကုန်လုံး ကျွန်တော် စားပလိုက်မယ်နော်း)
ကောင်းလိုက်တာ.. အကုန်ကျလဲသက်သာ ထမင်းလဲ မြိန်စေမယ့်ဟင်းလေးတွေ...
7/30/2009 1:54 AM
ဟင်းချက်ကောင်းချင်းဟာ အိမ်ရှင်မကောင်းတို့ရဲ့ အရည် အချင်း တစ်ခုပဲ...ဟဲ ဟဲ...(မောင်ူကီး)
7/30/2009 2:20 AM
You are really good cook.
I will teach you next time more items to add.
7/30/2009 3:04 AM
အာလူးကို ကျနော်လည်း ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ။ အာလူးကို ငရုပ်သီးစိမ်းနဲ့ အစပ်ချက်သည်ဖြစ်စေ၊ အနှစ်ထောင်းပြီး ချက်သည်ဖြစ်စေ၊ အာလူးကို အ၀ိုင်းပြားလေးတွေ လှီးပြီး ကျော်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြုတ်ပြီး ချေကာ ကြက်သွန်နီနှင့် သုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ချေမွကာ ဆီသတ်၍ ကြော်ချက်သည်ဖြစ်စေ၊ စမူဆာထဲပါသည်ဖြစ်စေ၊ ဘိုလို smashed potatos ဖြစ်စေ အားလုံးကို ကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ဗန်ဂိုးရဲ့ အာလူးစားသူများ ပန်းချီကားကြည့်ရတော့ သူတို့ဆီမှာ အာလူးကို ဘာလို့ ဆင်းရဲသားစာလို့ သတ်မှတ်ရသလဲ ဆိုပြီးတောင် တွေးမိသေးတယ်။
ငယ်ငယ်က အမေတို့ အညာမှာချက်တဲ့ အစိတ်လိုက် လှီးတဲ့ပြီး ဆီပါလေကာမျှနဲ့ချက်ထားတဲ့ ငရုပ်သီးစပ်စပ် အာလူးဟင်းဟာ စားပြီးရင် စပ်လွန်းလို့ ရေအ၀သောက်ကာ လေတရွှီးရွှီး ချွန်နေရပေမယ့် အရသာက တကယ်မိုက်တယ်။
အချဉ်ကျပြန်တော့လည်း ပဲချဉ်၊ မုန်လာချဉ်၊ ကန်စွန်းချဉ် အကုန်ကြိုက်။ အပြင်မှာ မိုးတွေ တ၀ုန်းဝုန်းရွာနေတုန်းမှာ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းမှာ ထိုင်ပြီး ငပိရည်ဖျော် (သို့မဟုတ်) ငန်ပြာရည်ဖျော်နဲ့ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ အချဉ်တမျိုးမျိုးရယ်၊ တို့စရာ အသီးအရွက် တမျိုးမျိုးပါရင် တခြားဟင်း မပါလည်း မြိန်တာများတယ်။
အင်း… နအဖ အစိုးရက နာဂစ်တိုက်အပြီးမှာ ဗမာတွေအတွက် အစားအစာ ပူစရာမလိုဘူး။ စားစရာမရှိရင် မှိုတို့ ကန်စွန်းရွက်တို့၊ ဖားတို့ ငါးတို့ ရှာစားလိမ့်မယ်လို့ ပြောတုန်းက ဒင်းတို့ကို ဒေါသသာ ထွက်ရတယ်၊ တဖက်မှာ ကိုယ်ကလည်း အဲဒီအစားအစာတွေကို အသေကြိုက်နေတော့ ရယ်ကလည်း ရယ်ချင်သေးတယ်။
ရွက်လွှင့်ခြင်း ... စားသာစား အားမနာနဲ့။ ကုန်ရင် ထပ်ချက်ကျွေးအုံးမယ်။
ကိုဟယ်ရီ ... အပေါဆုံးက အာလူးမို့ အာလူးပဲပေးနိုင်တယ်ရှင့်။
စန္ဒကူး ... ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျမလဲ စန္ဒကူးတို့ကို အားကျလို့ တခါတလေ ဘလော့ပေါ် ဟင်းထချက်ကြည့်တာပါ။
အမည်မဲ့ ကိုမောင်ကြီး ... ကျမက ဟင်းချက်သိပ်မကောင်းတော့ အိမ်ရှင်မကောင်းရဲ့ အရည်အချင်း မရှိဘူး ထင်ပါရဲ့။
မခိုင် ... မတွေ့တာကြာပြီနော်။ မခိုင် သင်ပေးမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာသွားပြီ။
ကိုပေါ ... အကြိုက်ချင်းတော့ တူနေပြီ။ ကိုပေါရေးထားတဲ့ အာလူးချက်နည်းမျိုးစုံကိုဖတ်ရတာ ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီ။ ကိုပေါ ဒီလောက်သိနေတာများ အိမ်မှာချက်မစားဘူး။ ကိုပေါတို့ ဆိုင်မှာပဲသွားစားတယ်ဆိုတာ တခါဖတ်ဖူးလိုက်သေးတယ်။ မဒမ်ပေါကိုချက်ခိုင်းလေ။ မြို့စားကြီးဦးအာလူးအတွက် စပယ်ရှယ် အာလူးဟင်းမျိုးစုံ။ :D
မိုးကောင်းသူရဲ့ ဟင်းလျာတွေလဲ ကျမသွားသွားငေးရတာ အမောပါပဲ။ အသုပ်လေးတွေ နည်းတောင်ယူခဲ့ရသေးတယ်။
ကျမရဲ့ မကောင်းမကန်း ဟင်းလေးတွေကို အားပေးကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
အောင်မလေး နောက်တောင်ကျနေပြီ ကုန်ပြီလားမသိဘူး... မကြီး ဆမူစာလေး အရင်းအတိုင်းပြန်ရောင်းပါ့လားဟင်... ဟင်းချိုလေးပါရင် ပိုမြိန်မယ်နော်.. ကျနော်ကို ဘာဟင်းချက်လဲ မမေးနဲ့နော်
ကျနော်လုပ်စားတော့မယ်ဗျ။ ရှေ့အပတ် ပိတ်ရက်ကို။ ဟဲဟဲ။ ခုတော့ ထမင်းစားပြီးကာစမို့ ဟိုဟာနဲနဲ ဒီဟာနဲနဲ နှိုက်စားသွားတယ်။ ခိခိ။
7/30/2009 9:01 AM
ပဲပင်ပေါက်ချဉ်ကို အဲလို ကြော်မစားဖူးဘူး
7/30/2009 12:43 PM
အဲ ... တိုဟူး၊ ပဲပြား၊ နွား နို့ခဲ နဲ့ ပဲပုတ် ထောင်း ခရမ်းချဉ် ပန်ထွေ ဖျော် တို့လဲ လုပ်ပါအုံး ဗျ။
နေတိုင်းအာလူး ဆိုရင် လူပုံတွေလဲ ကြာရင် ထူးလာမှာဘဲ။ မနှစ် က နဲ ကနဲ့ မတူတော့ဘဲ ချက်ခြင်း စည်ပိုင်း ပုံဖြစ်လာမှာဘဲနော်။
ရှိတာနဲ့ ကောင်းအောင်ချက်ရမှာ ဆို တော့ ချေးများမနေတော့ပါဘူး။
ဩ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ အလားကားစားရတာဘဲ နော်
ဒါထက် ဈေးသက်သာတာ ဘာမှ မရှိ တော့ဘူး
ဟင်းချက် ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ရတာတော့ နိမ့်သား။
မခိုင်က ကော ဘာတွေ ချက်မလဲ မသိဘူး
သင်တန်းစ ရင် ပြောပါအုံးဗျာ
ဟင်းချက်တာ သင်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်
အရသာ ကောင်းမကောင် မြည်းပေးမှာ ကို ပြောတာ..
အသစ်အစမ်းတွေချက်ပြီးရင် သံချောင်းသာ ခေါက်လိုက်ပါ ဗျို့....
Yeah, potato was essential.
7/31/2009 2:43 AM